Iphaneli yezinyosi ze-anodised aluminium ujantshi wesitimela, ibhasi, iphaneli yomkhumbi ongaphansi komhlaba, i-China Anodized aluminium uju lwezinyosi zezitimela, ujantshi, umkhumbi wokupholisa umkhumbi Abakhiqizi, Abahlinzeki, Abasebenza - Amafektri - I-Suzhou Beecore Honeycomb Equipment Co, Ltd
Amapaneli oju lwezinyosi e-Anodized alodum athatha i-anodised AI-Mg Alloy njengesikhumba sangaphambili kanye ne-corrosion coated sheet le-aluminium njengesikhumba sangemuva, ngaphakathi kune-aluminium honeycomb cores. Yonke i-alloy esetshenzisiwe ingama-3003 uchungechunge embonini ye-aluminium alloy.
● Izinto zokwakha ezintsha, zesimanje nezinhle
Inqubo ye-Anodizing ihlukile kunqubo evamile yokupenda ye-aluminium. Inqubo yokwenza i-elekthronikhi i-electrolyzing i-electrolyte ene-conditive acid ngokusebenzisa amandla kagesi ukwenza umhlaba we-aluminium udale futhi ukhiqize ifilimu elimnyama lokuvikela i-oxide. Ifilimu le-oxide alingeziwe njengokupenda, ngeke liphume.
● Kuphephile, konga amandla futhi kungenzeka kabusha
Ifilimu elivikelwe nge-anodised luhlobo lwezinto ezingaphili ngaphandle kwezindikimba eziyingozi. Futhi futhi izinto ezingahambisani nezinto ezingama-100% ezingaphindwa zisebenze, ngakho-ke akuphephile ukusebenzisa kodwa futhi nokonga amandla.
● Kulula ukuyihlanza futhi uyigcine
Ingaphezulu leju lezinyosi le-anodized aluminium lingamelana nokungcoliswa komhlaba kanye nokumelana nesimo sezulu. Ingxenye ekhethekile yefilimu yokuvikela i-oxide yenza iphaneli lezinyosi likhululeke othulini nasezandleni zomunwe.
Ukuqina kwepaneli lezinyosi 10-25mm noma ngokwezifiso
Ububanzi bephaneli 1220mm, 1550mm noma egcizelele
Ubude bephaneli 2440mm noma egcizelele
Okungaphezulu kuqediwe I-Anodizing
Iphaneli yezinyosi ze-HPL
I-5 Axis CNC Inhlanganisela ne-aluminium （B2-905020D）